Bogga Ciyaaraha, 13 January 2018
Sabti 13 January 2018
Real Madrid Oo Guul Kasoo Hoysay Tartanka Spain
Real Madrid rayaa gaartay wareega sideedda ee koobka dalka Spain, kadib marki ay laba is-arak oo ay la dheesgay kooxda heerka labaad ee Numancia, ku garaacday goolal dhan 5-2.
PSG oo U gudubay Semi-finalka French Cup
Kooxda Paris St-Germain ayaa u gudubtay wareega afar-dhaamdka, kadib marki ay 2-0 ku garaacdat Amiens.
Wenger oo Qalqaalinaya Sanchez
Kooxda Arsenal ayaa quudareyneysa in ay ku qanciso weeraryahankeeda Alexes Sanchez inuu saxiixo heshiis cusub oo uu kooxda kula sii joogayo, xilli uu qarka u saaranyahay inuu ku biiro kooxda Manchester City.
Philippe Coutinho oo ku Biirey Barcelona
Philippe Coutinho, ayaa ku sugan Barcelona, kadib markii labada kooxood ee Barcelona iyo Liverpool ay ku heshiiyeen in ciyaartoygaasi uu u wareego naadiga dalka Spain, oo Liverpool-na ay qaadato 142 Milyan oo Yuuro.
Mohamed Salah oo Loo Doortay Laacibka Africa
Laacibka xulka Masar iyo kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa maanta oo Jimco ah loo magacaabay xidiga sanadka 2017 ee Qaarada Africa.
Dembele oo Dib Usoo Laabtay
Laacibka lacagaha badan ay kasoo bixisay kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa dib ugu soo laabtay garoomada kadib marki uu kasoo bogsaday dhaawac uu la jiifay tan iyo bishii September.
Torino oo yeelatay Tababare Cusub
Kooxda kubadda cakta Torino ee dalka Talyaaniga ayaa shaqada ka ceyrisay macalin Sinisa Mihajlovic, isla markaana ku badashay tababarihi hore ee kooxda Inter Walter Mazzarr.
Warkii ugu Dambeeyay ee Ciyaaraha
Ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo qodobbada aad ku dhageysan doontaan ay ka mid yihiin: Kulamadii horyaalka Ingiriiska ee la ciyaaray iyo kuwa maanta dhacaya.
Xaggee La Kala Maryaa Horyaalka Ingiriiska
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa mar kale todobaadkan la ciyaaray, iyadoo kooxda Chlesea ay kusoo laabatay kaalinta labaad.
Napoli iyo Juventus oo Isku Haya Horyaalka Talyaaniga
Kulamo xiisa leh oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da ayaa shalay iyo xalay la ciyaaray. Kooxda Napoli ayaa wali hogaanka horyaalka seysa.
Barcelona oo Garaacday Real Madrid
Kooxda Barcelona ayaa si xaraga leh u qaadatay libinta kulanka ugu caansan xilligan dunida kubada cakta ee EL Clasico, kadib marki ay 3-0 ugu awood sheegatay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Real Madrid.